Dhibaatada xaaladda nolosha | Suomen Mielenterveysseura
Noloshu waxay martaa isbaddallo dabiici ah, oo looga gudbo marxaladba marxaladda kale. Qof markiiba inta badan waxaa ka muuqanaya waxyeelada dhibaatada nolosha, taasoo ka kabashadeedu keento in looga gudbo xaalad nolol cusub. Tusaale ahaan waxa sababi karo waxbarasho bilaabidda, guri ka guuridda, ilma dhalidda, carruurta oo guriga ka guurta ama hawl-gab noqoshada. Sidoo kale sii gaboobida qofka iyo da’diisa sii korodheysa ayuu dhibaato u dareemi karaa.
Dhibaatada lamaanaha waxaad ka akhrisaa bogga Väestöliitto.
Isbeddelka marxaladda nolosha waa mid u muuqata jahawareer iyo adeyg. Hababka kala duwan ee looga gudbayo ma sahlana welina lama helin qaab cusub. Isbadelka la doonayo ayaa keeni kara walaac iyo hammiga oo yaraada. Imaanshaha dhibaatada iyo xoogeedaba waxaa saameeya inta badan nooca ay tahay xaaladda guud ee nolosh ee ay keentay masiibadu iyo saameynta dhibaatada intey le’eg tahay. Haddii sida kale xaaladda noloshu adag tahay, dabcan isbedelku wuu adkaanayaa.
Mararka qaarkood isbedelka xaaladda noloshu waxay soo celisaa xusuus hore oo muhiim ah iyo kuwo murugo leh. Murugo iyo walaac sanado hore ayaa markiiba soo noqda iyo walwal qofka laftiisa iyo ehelkiisa ka welwela. Dhibaatadu waxay furtaa marwalba fursado leh horumar iyo adkeysi: fahamka marxaladda, isbadelka aragtida nolosha, qaabilidda wajiga cusub ee nolosha.